ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ရွှေဘိုဒေသထွက် ဖရဲသီးများ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ဈေးကွက်မှ ဝယ်ယူမှု မျာြး?? - Yangon Media Group
ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ရွှေဘိုဒေသထွက် ဖရဲသီးများ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ဈေးကွက်မှ ဝယ်ယူမှု မျာြး??
ဂန့်ဂေါ၊ မတ် ၅
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ရွှေဘို၊ တောင်ခရမ်း၊မြောက်ခရမ်းဒေသထွက်ဖရဲသီးများကို ချင်းပြည် နယ်မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ် ဈေးကွက်မှဝယ်ယူမှု များပြားနေသည့်အတွက် ဖရဲစိုက် တောင်သူများ ဈေးကောင်းရနေကြောင်းသိရသည်။ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်ရွှေဘို၊တောင် ခရမ်း၊ မြေက်ခရမ်းဒေသနှင့် မြစ်သာမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်ရှိ နုန်းတင်မြေနုတွင် နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးသည့် ဖရဲသီးများကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ကလေးမြို့ သစ်သီးဈေး ကွက်သို့လည်းကောင်း၊ တမူးနယ်စပ်သို့လည်းကောင်း၊ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်းမော်လိုက်၊ ဖောင်းပြင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့ဈေးကွက်များနှင့် ရွှေနှင့်ကျောက်မျက်ထွက်သည့် ဒေသများသို့လည်းကောင်း နှစ်စဉ်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ရာ ယခုနှစ်တွင် ချင်းပြည်နယ၊် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ဈေးကွက်ကပါ ဈေး ကောင်းပေး၍ အများအပြားဝယ် ယူနေကြသည်။
”ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကတော့ ကလေးမြို့ဈေးကွက်ကို အဓိကထား တင်ပို့ခဲ့တယ်၊ကလေးမြို့ဈေး ကွက်မှာ ဖရဲသီးတစ်လုံးကိုကျပ် ၁ဝဝဝ အများဆုံးရောင်းအဝယ်ဖြစ် တယ်၊အခုနှစ်တော့ကလေးမြို့ဈေး ကွက်မှာ ဖရဲသီးတစ်လုံးကိုကျပ် ၁၅ဝဝ အထိ အရောင်းအဝယ်ဖြစ် ပြီး၊ ရိဒ်နယ်စပ်နဲ့ချင်းတောင်မှာ ဖရဲသီးတစ်လုံးကိုကျပ် ၂ဝဝဝ ကနေ ကျပ် ၃ဝဝဝအထိ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်တယ်” ဟု ဂန့်ဂေါမြို့နယ် ရွှေဘို ရွာ ဖရဲစိုက်တောင်သူ ဦးဖိုးဦးက မတ် ၃ ရက်က ပြောသည်။
ဂန့်ဂေါနယ်ရွှေဘိုဖရဲမှာ မိုးကုန်ရာသီတွင် ဆောင်းသီးနှံအဖြစ် စတင်စိုက်ပျိုးကြပြီး၊ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယပတ်မှစတင်ကာ ဈေးကွက်သို့ဝင်ရောက်လာပြီး ယခုရက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ရိဒ်ရောင်းဝယ်ရေးဂိတ်အထိ ဖရဲသီးတင်ကား တစ်စီးလျှင် ကျပ် ၆ဝဝဝဝဝ ဝန်းကျင်ပေးရပြီး၊ ဖရဲသီးအလုံး ၈ဝဝမှ ၁ဝဝဝ ဝန်း ကျင် တင်ရကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှ နေရပ်ပြန် မြန်မာအလုပ်သမားများ များပြားနေသောကြောင့် မြဝတီမြို့ ၌ အဝေးပြေးက
မန္တလေးမြို့၏ အလှပဆုံးဖြစ်လာမည့် ၆၆ လမ်း ကျုံးဘေးပလက်ဖောင်း ပြင်ဆင်မှု သင်္ကြန်မတိုင်ခင် အပြီ??
ကိုယ်ပိုင် အမှတ်အသားဖြင့် အောင်မြင်မှုရရန် ကီတာ ကြိုးစားမည်
အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေသော နာဆရီကို ဝက်စ်ဟမ်းအသင်း ကာလတို ခေါ်ယူဖွယ်ရှိ
အစ္စရေးနှင့်ပွဲတွင် ပါဝင်ကစားခြင်း မပြုရန် မက်ဆီကို ပါလက်စတိုင်း တိုက်တွန်း
လာဘ်စားမှုဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် တရားခံပြေး ၁၂ ဦး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းမည်